दुनियाँ – Page 113 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०६:१८ English
सचिनलाई संसद बनाएको विषयमा जवाफ माग ३ जेष्ठ २०६९, बुधबार १७:३१
नयाँदिल्ली, जेष्ठ ३ - क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरको राज्यसभा सदस्यमा भएको मनोनयबारे दिल्ली उच्च अदालतले केन्द्र सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । सचिनको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा बुधबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि सपथ रोक्न गरिएको माग भने..
पेरुमा भएको बस दुर्घटनामा १९ को मृत्यु ३० बैशाख २०६९, शनिबार १७:३५
काठमाडौ, ३० बैशाख । पेरुको अमाजोनियन क्षेत्रमा हिजोराति भएको बस दुर्घटनामा परी सो बसमा रहेका कम्तीमा पनि १९ जना यात्रुको ज्यान गएको समाचार छ । पेरुको चपोयास नगरका नगरप्रमुख जोस सान्तोसका अनुसार सो बस उक्त क्षेत्रको पहाडी राजमार्गबाट करिब १५० मिटर तल खसेको थियो । बस चापोयास नगरबाट..
अफगान सैनिकद्वारा यसवर्षमात्र बीस विदेशी सैनिकको हत्या ३० बैशाख २०६९, शनिबार १७:३३
काठमाडौ, ३० बैशाख । यसवर्ष मात्र कम्तीमा पनि बीसजना नेटो सैनिक अफगान सैनिकद्वारा मारिएका छन् । अफगानिस्तानमा कार्यरत रहेका बेला उनीहरुको हत्या भएको हो । हिजोमात्र एक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सैनकिद्वारा मारिएपछि हत्या भएका नेटो सैनिकको सङ्ख्या बीस पुगेको हो । विगत..
हराएको रुसी यात्रु वाहक विमानको अवशेष भेटियो २८ बैशाख २०६९, बिहीबार १८:४६
इन्डोनेसिया,एजेन्सी, २८ वैशाख । प्रदर्शन उडानका क्रममा इन्डोनेसियामा हराइ रहेको रुसी यात्रु वाहक विमानको अवशेष पहाडी क्षेत्रमा भेटिएको छ । उक्त सुखोइ सुपरजेट १०० को खोजीमा रहेको टोलीले जाकर्ताको दक्षिणमा ज्वालामुखी पहाड माउन्ट सालाक नजिकै ५ हजार ८ सय फिट माथि विमानको अवशेष..
रुसी विमान इन्डोनेसियामा हरायो २७ बैशाख २०६९, बुधबार १९:१४
इन्डोनेसिया, वैशाख २७ एजेन्सी । यात्रुसहित प्रदर्शन उडानमा रहेको एक रुसी सुखोइ सुपरजेट १०० इन्डोनेसियाको राजधानी जाकर्ताको दक्षिण भागमा बुधबार हराएको छ । विमानको खोजी कार्य जारी छ। 'विमान बोगर क्षेत्र नजिकै राडारबाट हराएको थियो। हामीहरू यसको खोजीमा छौँ र यो दुर्घटना भएको हो होइन..
रुसको दागेस्तान क्षेत्रमा भएको बम विस्फोटमा २० को मृत्यु २२ बैशाख २०६९, शुक्रबार १९:४९
मस्को, एजेन्सी, २२ वैशाख । रुसको राजधानी मस्को बाहिरको दंगाग्रस्त दागेस्तान क्षेत्रमा भएको दुई वटा शक्ति शालि बम विस्फोटमा २० जनाको मृत्यु हुनुकासाथै ३० जना घाइते भएका छन् । पहिलो विस्फोट प्रहरीले एउटा वाहनलाई जाँचका लागि रोक्ने क्रममा भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो विस्फोट..
मुनद्वारा नेतृ आङसाङ सुकिको प्रशंसा १९ बैशाख २०६९, मंगलवार १९:३५
म्यानमार, एजेन्सी १९ वैशाख । राष्ट्र संघका महासचिव बानकी मुनले म्यानमारकी प्रजातन्त्रबादी नेतृ आङसाङ सुकिको प्रशंसा गरेका छन्। उनले म्यानमारलाई प्रजातन्त्रको बाटो तर्फ डोर्‍याउने सुकिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। सुकिसँगको भेटका क्रममा आफूले न्यूयोर्क स्थित संयुक्त..
प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ्ग साङ्ग सुकी सांसद पदको सपथ लिदैं १८ बैशाख २०६९, सोमबार १९:०१
एजेन्सी,यंगुन, १८ वैशाख । म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ्ग साङ्ग सुकी सांसद पदको सपथ लिने तरखरमा रहेकी छिन्। सुकीले आफू र आफ्ना दलका नवनिर्वाचित सांसद आफ्नो पदको सपथ लिन तैायर रहेको बताएकी छिन्। सपथमा पत्रमा उल्लेख गरिएको भाषामा भने उनको सहमती नरहेको बताइएको छ। त्यसमा..
युरोपियन युनियनले बर्मामा कार्यालय स्थापना गर्ने १६ बैशाख २०६९, शनिबार १९:२५
एजेन्सी, लण्डन, वैशाख १६ । युरोपियन युनियनले बर्मामा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । यस निर्णयलाई त्यहाँ भइरहेको राजनैतिक सुधार प्रति युनियनको समर्थनका रुपमा लिइएको छ। युरोपियन युनियनकी विदेश नीति प्रमुख क्याथरिन एश्टनले बर्मामा सुधार जारी रहनु पर्ने बताएकी छिन्। हाल बर्मा..
बिन लादेनका तीन पत्नीसंगै परिवारका ११ सदस्य साउदी तर्फ १५ बैशाख २०६९, शुक्रबार १८:५२
एजेन्सी, १५ वैशाख । पाकिस्तानले शुक्रबार अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनका तीन पत्नीसँगै परिवारका अन्य ११ जना सदस्यलाई साउदी अरेबिया निष्कासन गरेको छ । गत वर्षको मे महिनामा पाकिस्तानको एबटाबादमा अमेरिकी विशेष सैनिक समूहको कार्यवाहीमा मृत्यु भएका लादेनका परिवारका सदस्यहरूलाई अवैध..
गिलानीले तत्काल राजिनामा दिनु पर्छ: पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ १५ बैशाख २०६९, शुक्रबार ०१:५६
एजेन्सी, १४ वैशाख । पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान मुस्लिम लिगका नेता नवाज सरिफले बिहिबार अदालतको अपहेलनाको दोसी पाइएका प्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीको राजिनामा मागेका छन्।सरिफले निजी टेलिभिजन च्यानलमा भने. प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिनु पर्छ र..
पाकिस्तानद्वारा बलेस्टिक मिसाइल हत्फ ४ को परिक्षण १३ बैशाख २०६९, बुधबार २१:२४
एजेन्सी, पाकिस्तान, १३ वैशाख । पाकिस्तानले बुधबार परमाणु हतियार लैजान क्षमताको बलेस्टिक मिसाइल हत्फ ४ को सफल परिक्षण गरेको छ। पाकिस्तानले गत साता भारतले गरेको अग्नी ५ मिसाइलको जवाफमा उक्त परिक्षण गरेको जानकारहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानी सेनाले एक विज्ञप्ती मार्फत आफूले आफ्नो..
दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स फेला पर्यो,दुर्घटनामा ११ बालबालिका परे,बच्ने सम्भावना छैन ९ बैशाख २०६९, शनिबार २०:१८
पाकिस्तान, ९ बैशाख (एजेन्सी) । पाकिस्तानमा दुर्घटना भएको विमानको बोइङ्ग ७३७ को ब्ल्याक बक्स रेकर्डर फेला परेको छ। दुर्घटनाको जाँच गरिरहेका अधिकारीहरूले विमानको अवशेष हटाउने क्रममा उक्त ब्ल्याक बक्स फेला परेको हो। उक्त दुर्घटना खराब मौसमका कारण भएको बताइएको छ। विमान अवतरण हुदा..
पाकिस्तानमा विमान दुर्घटना, ११८ जनाको मृत्यु ८ बैशाख २०६९, शुक्रबार २१:४२
कराची, पाकिस्तान, (एजेन्सी) ८ बैशाख । उत्तरी पाकिस्तानमा १२७ जना चढेको यात्रुवाहक विमान दुर्घटना भएको छ। भोज एअरको सो बोइङ ७३७ विमान कराचीबाट इस्लामावादतर्फ उडिरहेको थियो। दुर्घटनामा ११८ जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्‌धृत गर्दै पाकिस्तानी मिडिया डनको अनलाइन..